Kelikely tsaratsara, be tsy andraofana… | NewsMada
Mbola (ho) resabe… hatramin’ny taona 2030 ny hoe fisandratan’i Madagasikara? ”Aleo mandà tsy handeha toy izay manaiky tsy ho lasa”, hoy ny ohabolan-drazana izay. Raha lazaina amin’ny fomba hafa: aleo mitanisa zavatra kely ao anatin’ny fotoana fohy, ary azo tanterahina sy mety ho vita. « Kelikely tsaratsara », hoy ny mahay milaza.
Hafa ny be tsy andraofana: famaritana hoe hanao an’itsy sy iroa, manjehy ny andro ho lava. Nefa tsy ho arakaraka izay lazaina tsinona ny atao. Ny mahay vava, tsy mahay vava harona. Asa vava no atao, fa tsy vava asa. Efa lany amin’ny fitanisana sy famaritana izao sy izatsy ny rondoha, ny hery, ny fotoana… ? Vokany, tsy misy asa vita.
”Aleo, hono, matoky tapany toy izay mangovitra erany”. Saika tsy atokisan’ny maro avy hatrany ary mampangovitra na mampatahotra aza izay mampiraparapa ny tena any amin’ny toerana sy fotoana lavitra tsy fantatra na sarotra faritana. Tsy inona fa miantsampy amin’ny hazo tsy fantatra, mihinana hena tsy fantatra anarana…
Tsy misy maharatsy ny vina na eritreritra nofy mangina, saingy… Ahoana aloha ny eto sy ny anio? ”Ny varivarian’ny lavitra, tsy mahita izay ambanin’ny maso”: mety ho tafintohina. Izay no manafintohina ny sasany amin’ny karazana vina lavitra, nefa ny anio sy ny eto aza tsy misy tokotaniny? Vao mainka fahavoazana aza…
Ny loza, fantatra izao fa tsy ho tanteraka ny fampanantenana… poakaty. Tsy hita izay vita amin’ny eo ambany maso sy ny anio. Ny efa-taona aza efa taolana, vao mainka ny tao-maro… tsy fantatra hoe aiza ho aiza ny tena amin’izany? « Tsara kokoa ny mandà inarivo no ho ny fampantenana tsy tanteraka », hoy ny ohabolana sinoa.
« Raha te handeha haingana ianao, mandeha irery; fa raha te ho lasa lavitra, mandehana miaraka », hoy ny ohabolana afrikanina. Misy te hisongadina irery fa tsy miraharaha ny hafa? Na mandeha irery an-jambany, fa hadino ny zava-misy amin’izay tena manjo ny maro. Mahaiza misafidy: ny kelikely tsaratsara sa ny be tsy andraofana?